EU: Sharci laga soo saaray isticmaalka Mobileka - BBC News Somali
EU: Sharci laga soo saaray isticmaalka Mobileka
27 Oktoobar 2015
Baarlamaanka Yurub ayaa soo saaray sharci cusub oo lagu joojinayo lacagta dheeraadka ah ee laga qaado dadka ku nool Midowga Yurub marka ay teleefoonada Mobileka ku isticmaalaan waddan kale ee Midowga Yurub.
Lacagta dheeradka ee dadka laga qaado ayaa bisha April waxba lagu kordhin doonin. June sanadka 2017-ka waa la wada joojin doonaa lacagta dheeraadka ee laga qaado dadka.
In la isticmaalo Mobileka, in telefoonka laga diro fariinta qoraalka iyo internetka la galo teleefoonka ayaa qiimahoodu isku mid noqon doonaa markaad joogtid waddan walba oo ka mid ah Midowga Yurub.
Dadka dhaleeceeya ayaa sheegaya inuu sharciga cusub ku dhiiri galin karo shirkadaha inay kordhiyaan sicirka telefoonka, laakiin taageeerayaasha ayaa sheegaya in la sameeyay hab looga hortago in shirkadaha ay kordhiyaan sicirka.